हिजोको मोती, आजको माटो ~ brazesh
हिजोको मोती, आजको माटो
समयले कसरी कोल्टो फेर्छ भन्ने कुरा पनि अचम्मको छ । उत्थान र पतनको कुनै सीमा हुन्न । शक्ति र प्रभाव भन्ने कुरो पनि कहिले कसको त कहिले कसको । अनि जसको शक्ति, त्यसैको भक्ति । शक्तिशाली हुन्जेल त्यसैको हाइहाइ, जुनदिन त्यो भएन, त्यसदिनदेखि केही न केही । बडो निष्ठूरी छ यो संसार र त्यस्तै छौं यसमा बस्ने हामी मान्छेहरू । हिजो जे मोती, आज त्यही माटो अनि भोलि त्यही कौडी । यो क्रम निरन्तर, संधै यस्तै । कुनै बेला 'राष्ट्रपिता' भनिन्थे राजा त्रिभुवन । त्रिपुरेश्वरमा हामीले जन्मे हुर्के बेलादेखि गर्वसाथ ठाडो बसेको यो सालिक अहिले पनि त्यस्तै ठाडो, तर आज तिनकै सालिकको यो हविगत । सालिक चाहिन्न भने हटाऊ, राख्ने भए मर्मत गरेर राख । यसरी क्षतविक्षत बनाएर राख्नुको के औचित्य ? हेर्नुस् त कति बिभत्स देखिन्छ त्यो सालिक?
कुनै पनि सालिक, सालिकमा भएको व्यक्तिको अहम् लालसा मात्रै नभै - यो स्रजकले देशलाई संस्कृती र कला धनी बनाउन गरेको अथक प्रयास अनि इतिहासले हामीलाई सुम्पेको हाम्रा आउँदा भविष्यको धरोहर पनि हो, तर ..........
आज, सालिकमा भएको व्यक्तित्व न त अमर छ अनि साथै यस्ता अमरकृतिका साथै धरशायी हुँदैछन् अमर चित्रकारहरुका अतुलनिय देन पनि...............
~ R :-)